DF oo laga dalbaday iney wax ka qabato hay’adaha ajnabiga ah ee ku lug leh. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii DF oo laga dalbaday iney wax ka qabato hay’adaha ajnabiga ah ee...
Kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen Culimada, Qeybaha Bulshada iyo Hay’adaha Dowladda ayaa lagu falanqeeyay xaaladaha la xariira anshax xumada isa soo taraysa iyo mukhadaraat ama Maandooriyaha dalka ugu sii fidaya si xowli ah.
Guddoomiyaha hay’adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa warbaahinta u akhriyey Bayaan kasoo baxay hay’adda kadib kulan looga hadlayey ka hortagga falalka dhaqan xumada ah iyo muqaadaraadka oo maanta muqdisho lagu qabtay.
In qaybaha kala gadisan ee shacabka iyo hay’adaha dowladdu iska kaashadaan la dagaalanka anshax xumada iyo mukhadaraadka, culumadana loo fududeeyo dacwadda iyo wacyigelinta.
In dalka laga hirgeliyo Hay’adda Wanaag faridda iyo Xumaan reebidda, loona magacaabo guddigii diyaarin lahaa.
In si deg deg ah la dajiyo lana ansixiyo sharciga la dagaalanka mukhaadiraadka.
In la dhiso gole culumo oo dastuuri ah oo hubiya is waafaqsanaanta xeerarka la soo saarayo iyo shareecada islaamka sida dastuurku qabo.
In wax laga qabto hay’adaha ajnabiga ah ee ku lug leh anshax xumada iyo mukhaadiraadka.
In la qabto shirweyne qaran oo ku saabsan la dagaalanka anshax xumada iyo mukhaadaraadka.
In laga hortago oo la joojiyo wax kasta oo dhiirigalinaya anshax xumada iyo fuxshiga, sida is dhexgalka qaabka daran, iyo meelaha lagu tunto.
Previous articleMadaxweyne Deni Muqdisho kula kulmay Agaasime Max’ed Aadan Koofi? (Sawirro) By
Next articleSomali government urged to take action against foreign agencies involved
Al-Shabaab resumes attacks in Somalia
Gudomiye Basma Caamir oo ugu baaqday Ganacsatada gobolka Banaadir inay...
Faah Faahino kasoo baxaya dil ka dhacay Muqdisho iyo Al shabaab...